पक्राउ पर्दै महरा : 'बलात्कार प्रयास' को उजुरीसहित बुझ्‍नै पर्ने ५ कुरा - VOICE OF NEPAL
पक्राउ पर्दै महरा : ‘बलात्कार प्रयास’ को उजुरीसहित बुझ्‍नै पर्ने ५ कुरा
१९ आश्विन २०७६, आईतवार १०:४५
168 ??? ???????
बलात्कार आरोप लागेपछि पदबाट राजीनामा दिएका (निवर्तमान) सभामुख कृष्णबहादुर महराको राजनीतिक ‘करिअर’ धरापमा छ। राजनीतिक व्यक्तित्व त गर्ल्यामगुर्लुम ढलेको छ नै उनको चरित्रमा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
१. कानुनी कठघरामा महरा
अब प्रहरीको हिरासतमा बसेर न्यायालयसमक्ष आफूविरुद्ध लागेको आरोपको कानुनी प्रतिरक्षा गर्नु बाहेक अरु विकल्प महरासँग छैन।
अर्थात्, आफूलाई लगाइएको बलात्कार प्रयास आरोपको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार उनीसँग सुरक्षित छ।
सम्भवतः भोलि (आइतबार) अदालत खुलेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्नेछ। किनभने अब महरालाई पक्राउ नगर्नुपर्ने कुनै कारण प्रहरीसँग छैन। यसअघि प्रहरीले ‘किटानी जाहेरी नपरेकाले पक्राउ गर्न नसकेको’ जवाफ दिने गरेको थियो।
कानुनअनुसार हेर्दा प्रहरीले पहिले अदालतबाट पक्राउ पूर्जी लिनेछ। र, महरालाई पक्राउ गर्नेछ।
२. ‘बलात्कार प्रयास’ को आरोप
महराविरुद्ध संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीले आफूलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लगाएकी छन्। महरासँग पारिवारिक सम्बन्धमा रहेकी ती महिलाले शनिबार महानगरीय प्रहरी वृत्त, नयाँ बानेश्वरमा किटानी जाहेरी दिएकी हुन्।
यसअघि दुईवटा भिडियो अन्तर्वार्तामा उनले परस्पर विरोधी कुरा गरेकी थिइन्। पहिलो भिडियोमा उनले आफूलाई महराले बलात्कार गरेको दाबी गरेकी थिइन्। र, दोस्रो भिडियोमा महरा ‘बाबुसमान रहेको’ भन्दै महरामाथि लागेका सबै आरोपलाई ‘षड्यन्त्र’ भनेकी थिइन्।
ती महिलाले नागरिकखबर अनलाइनबाट आफ्नो परिचयसहित परस्पर विरोधी बयान दिएपछि पहिलो भिडियो अन्तर्वार्ता सार्वजनिक गर्ने हाम्राकुरा अनलाइनले पहिले खिचिएको भिडियो सार्वजनिक गरेको थियो।
तेस्रो भिडियोमा महरा र आफूबीच भएका च्याट, म्यासेजहरूलाई उनले आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको पुष्टि गर्ने प्रमाणका रुपमा देखाएकी छन्। पढ्नुस्ः २४ घण्टामा ‘रोशनी’ को यू-टर्न : छानबिन होला कि फिस्‍स ?
३. के गर्छ प्रहरीले ?
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक होबिन्द्र बोगटीले महराविरुद्ध परेको उजुरीको “अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको” बताएका छन्।
प्रहरी सुरुदेखि नै यो घटनासँग जोडिएको छ। हाम्राकुराले गरेको भिडियो अन्तर्वार्तामा ती महिलाले आफू बलात्कृत भएको भन्दै प्रहरीलाई १०० मा फोन गरी जानकारी गराएपछि महरा आफ्नो कोठाबाट बाहिरिएको बताएकी छन्। ती महिलाले कोठा, फुटेको भनिएको चस्मा, मदिराको बोत्तल र ग्लास तथा जुत्ताको तलुवा लगायतका प्रमाण प्रहरीलाई देखाएको पहिलो भिडियोमा बताएकी थिइन्।
अब प्रहरीसँग महरालाई पक्राउ गरी घटनाको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नेबाहेक अरु विकल्प छैन।
४. कानुन के छ ?
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छ। पीडित भनिएकी महिलाले शनिबार कसूरको जाहेरी दरखास्त दिएकी छन्। यसपछि प्रहरीले के गर्छ ? पढ्नुस् संहिताको व्यवस्थाः
अर्थात् प्रहरीले “कुनै कसूर भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने जानकारी वा सूचना वा सुराक पाई सुराक लिन गएका बखत वा आफ्नो उपस्थितिमा कुनै कसूर भएमा त्यस्तो कसूर गर्ने ब्यक्तिलाई तुरुन्त पक्राउ गर्नु पर्ने” मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को व्यवस्था छ।
पक्राउ गर्नुपूर्व प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पूर्जी लिनुपर्नेछ। ‘जघन्य कसूर वा गम्भीर कसूर लागेका अभियुक्तलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
५. कसूर प्रमाणित भए ?
अहिलेलाई महराले आफूलाई लगाइएको कसूर झेल्नेछन्। र, आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने मौका पाउनेछन्।
तर प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा दोषी ठहर भएमा उनले कैद सजायँ भोग्नुपर्नेछ।
जवर्जस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी कैद हुने व्यवस्था छ।
एउटा भिडियोमा महराले आफ्नो कोठामा आई बलात्कार गरेको र अर्को भिडियोमा कोठामा आउँदै नआएको बताएकी ती महिलाले उजुरी दिँदा भने ‘बलात्कार प्रयास गरेको’ भनेकी छन्।
अपारध शास्त्रमा यसलाई अपूर्ण अपराध (inchoate offence) भनिन्छ। यो भनेको ‘अपराध पूरा नभएको तर प्रयास गरेको’ अवस्था हो। दफा ३४ मा यस्तो अवस्थामा आधा सजायँ हुने व्यवस्था छ।
बलात्कार कसूरमा ७ देखि १० वर्ष सजायँ भएमा प्रयास गरेको अवस्था पुष्टि भएमा साढे ३ देखि ५ वर्ष सजायँ हुन सक्छ।
र, गुमेको राजीनिक छवि
महरालाई सभामुख पद छोड्न मन भने थिएन। पहिलोपटक उनले दिएको राजीनामा पत्र र दोस्रोपटक सुटुक्क दिएको राजीनामा पत्र हेर्दा त्यो थाहा हुन्छ। पढ्नुस्: राजीनामा पत्रमा महराले किन राखे शर्त ?
तर उनले राजीनामा नदिई सुखै पाएनन्। र, दोस्रोपटक उनले अघिल्लै दिनको मिति राखेर राजीनामा पत्र बुझाए। पढ्नुस्ः महराले दोस्रोपटक किन बुझाए राजीनामा ?
त्यसअघि सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्‍त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालय बैठकमार्फत् गत मंगलबार नै राजीनामा दिन सुझाएका थिए।
पीडित भनिएकी महिलाको मिडियामार्फत फेरिएको बयान र प्रहरीको अलमलले महरालाई नै क्षति पुर्‍यायो। घटना सार्वजनिक भएपछि महराले मिडियाहरूमा बोलेका कुरा, उनको सचिवालयले निकालेको विज्ञप्तिमा पनि कुराहरू बाझिइरहे।
माओवादीको सशस्त्र युद्धअघि नै सांसद, युद्धकालमा नेतृत्वदायी भूमिका, शान्तिवार्ताको भूमिका, पटकपटक मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिसभाको सभामुख। भद्र र शालिन व्यक्तित्व। उनको छवि यतिबेला करिब ध्वस्त भएको छ।
आफूविरुद्ध लागेको आरोपको कानुनी उपचार खोज्नेबाहेक अरु विकल्प महराका लागि करिब अन्त्य भएको छ। र, महरालाई पक्राउ गर्नुबाहेक प्रहरीका लागि पनि अरु विकल्प सकिएको छ। सम्भवतः दुबै भोलिको दिन कुरिरहेका छन्।